ADRA Myanmar Bids Farewell to Country Director and Family | ADRA Myanmar | Justice. Compassion. Love
A farewell lunch was held at Summit Parkview Hotel for ADRA Myanmar Yangon staff, and special guests from the Church and Board to commemorate this occasion. Many of our staff have not seen each in other in months due to COVID-19 so it was also the first time we have gathered together asateam to bid farewell with safety measures in place.
Under Claudio's leadership, ADRA Myanmar has experienced great change such as acquiring new projects like the $20+ million European Union funded CASE2Learn project, refining ADRA Myanmar's core sectors, expanding our financing and programs, buildingastronger relationship with the local Adventist Church, advocating for Indigenous education and continuing to strengthen our partnerships with local organizations and governments.
Claudio has served as Country Director of ADRA Myanmar for the last 4+ years. Brenda was previously employed as M&E Coordinator of ADRA Myanmar, but recently joined ADRA International last year in November 2019 and has been travelling between the US and Myanmar until the family were able to join her. Now both Claudio and his family will be moving to the US permanently.
On behalf of the ADRA Myanmar family, we want to thank Claudio and Brenda for their many years of service and wish good luck and God's blessings as you take on this next chapter.
Photo: © 2020 ADRA Myanmar | Emma McCrow & Pyae Phyo Lin
ယနေ့ ADRA Myanmar သည် Country Director ဖြစ်သူ Claudio၊ သူ၏ဇနီးဖြစ်သူ M&E Coordinator ဟောင်း Brenda နှင့် ၄င်းတို့၏သားသမီးနှစ်ဦီးကို ဝမ်းနည်းစွာဖြင့် နှုတ်ဆက်လိုက်ရပါသည်။
ရန်ကုန်မြို့ရှိ Summit Parkview ဟိုတယ်တွင် ADRA Myanmar ရန်ကုန်ရုံးဝန်ထမ်းများနှင့် နှုတ်ဆက်နေ့လည်စာစားပွဲကို ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး အသင်းတော်နှင့် ဘုတ်အဖွဲ့မှအထူးဧည့်သည်တော်များက တက်ရောက်ဂုဏ်ပြုခဲ့ကြသည်။ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါဖြစ်ပွားနေမှုကြောင့် ကျွန်ုတို့ဝန်ထမ်းများသည် မတွေ့မမြင်ကြသောကြောင့် နှုတ်ဆက်ရန်အတွက် ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် အတူတကွစုဝေးခဲ့ကြသည်။
Claudio ၏ ဦးဆောင်မှုအောက်တွင် ADRA Myanmar သည် ကြီးမားသောပြောင်းလဲမှုများကို ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ ဥပမာအနေဖြင့်ဆိုရပါက ဒေါ်လာသန်း ၂၀ ကျော်ရှိသော ဥရောပသမဂ္ဂက ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့သည့် CASE2Learn စီမံကိန်းကဲ့သို့သောစီမံကိန်းအသစ်များနှင့် ADRA Myanmar ၏ အဓိကအခန်းကဏ္ဍများကို ပြုပြင်ပြောင်းခဲခြင်း၊ ငွေကြေးနှင့်အစီအစဥ်များကို တိုးချဲ့ခြင်း၊ ဌာနေတိုင်းရင်းသားများ၏ ပညာရေးနှင့် ဒေသတွင်းအဖွဲ့အစည်းများ၊ အစိုးရတာဝန်ရှိသူများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကာ ကျွန်ုပ်တို့ဆက်လက်အားဖြည့်နိုင်ခဲ့သည်။
Claudio သည် ADRA Myanmar ၏ Country Director အဖြစ် လေးနှစ်ကျော်ကြာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ၎င်း၏ဇနီးဖြစ်သူ Brenda သည်လည်း ယခင်က ADRA Myanmar ၏ M&E ညှိနှိုင်းရေးမှူးအဖြစ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သော်လည်း မကြာသေးမီ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလအတွင်းက ADRA International ၌ ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး မိသားစုအတူတကွနေထိုင်နိုင်သည့်အချိန်အထိ အမေရိကန်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံအကြား ကူးလူးသွားလာခဲ့ရသည်။ ယခုအခါ Claudio နှင့် သူ၏ဇနီးဖြစ်သူ Brenda တို့ နှစ်ဦးစလုံးသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့ အခြေချပြောင်းရွှေ့ နေထိုင်သွားမည်ဖြစ်သည်။
Claudon နှင့် Brenda တို့၏ နှစ်ပေါင်းများစွာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ပေးခဲ့သည့်အတွက် ADRA မြန်မာမိသားစုကိုယ်စား ကျွန်ုပ်တို့သည် အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပြီး ရှေ့ဆက်၍လည်း ကံကောင်းပါစေရန်နှင့် ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေရန် ကျွန်ုပ်တို့က ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ရပါသည်။